Shina 2020 New Product New ultrasonic pest repeller mifehy ny voalavo voalavo voalavo voalavo am-boalavo EU UK AU US Plug orinasa sy mpanamboatra | Jinjiang
2020 New Product ultrasonic pest repeller mifehy ny voalavo voalavo voalavo voalavo amerikana EU UK AU US Plug
Faritra azo ampiharina: 100-150 metatra toradroa
Fotoana nampiasaina:> 480 ora
Famaritana: 2-5 Pieces
Karazan-bibikely: Ants, Bugs Bed, Beetles, Earwigs, Fleas, lalitra, totozy, MOSQUITOES, Moths, Pills Bugs, Scorpions, Borer, Ants, Beetles, Cockroache, Crickets, Fleas, lalitra, Mouse, mosquito
Toerana niaviany: Hunan, Sina
Laharana modely: CBK-097WE
Fonosana: 1/2/4/6 PACK
Anaran'ny vokatra: repeller fanaraha-maso peste ultrasonic
Fitaovana famerenana bibikely: ABS
Herin'ny repeller: <5W
Fahadisoan-tsolika bibikely: 20-120KHZ
Function: mpanala pesta
Taratasy fanamarinana: CE RoHS FCC EPA MSDS
Fe-potoana fandoavana: Fiantohana ara-barotra Paypal. Union Western.TT
Haben'ny takelaka: 43 * 63 * 98cm
Lanja afa-karatsaka: 45G
Fahaizana manome: 50000 Piece / Pieces isan-kerinandro
Antsipirian'ny fonosana: boaty miloko
Habetsahana (sombin-javatra) 1 - 3000 > 3000
Est. Fotoana (andro) 10 Hifampiraharahana
TEKNOLOGY ULTRASONIKA farany: namboarina ultrasound emission dual-chip marani-tsaina hamoaka amin'ny fomba mahomby ny karazana bibikely rehetra - voalavo, bibikely fandriana, hala, moka, roasy, parasy, vitsika, lalitra sns. Miaraka amin'ny fanovana miverimberina ny faharetan'ny repeller fanaraha-maso ny bibikely, ny bibikely sy ny totozy dia tsy afaka mampiorina ny hery fiarovana sy ny fahafaha-mihetsika.
SAFE SY HARMLESS: Ny onja ultrasonika izay natombok'ireo mpanala ny bibikely dia tsy misy akony afa-tsy amin'ny bibikely, TSY misy fiantraikany amin'ny zazakely, vehivavy bevohoka ary biby fiompy mahafinaritra. Tsy misy poizina, tsy misy fofona, tsy misy zavatra simika, tsy misy taratra, tsy misy fandrika. Manome anao antoka azo antoka 100% izahay.
Mora ny mampiasa sy mitsitsy angovo: asio zoro iray fotsiny ilay outlet amin'ny 32-47 santimetatra ambonin'ny tany ary avelao izy hanao ny ambiny. Raha vao tafiditra ao anaty socket ianao dia hirehitra ny jiro miaina malefaka malefaka izay mandany 0,096 kWh / andro fotsiny. Tsy misy tabataba, tsy misy jiro manjelanjelatra, milamina sy milamina andro aman'alina.
FONDRANA MAHAY MAHASOA SY FAMPIASANA: Ny repeller ultrason control control dia manaloka faritra hatramin'ny 1,600 Sq. Ft. Mpandroaka bibikely isaky ny efi-trano no atoro anao, tsy maninona ny efitra fatoriana, lakozia, efitrano fandraisam-bahiny, garazy sns.
Fiantohana 24 volana
Serivisy aorian'ny fivarotana 24ora
Fotoana mitarika haingana
Anaran'ny vokatra Ultrasonic Pest Repeller
ara-nofo Plastika ABS
Fanamarinana CE FCC MSDS ROHS
Volta fampidirana 90-250V
Herin'ny famoahana 4-6W
Naoty matetika 50-60Hz
Fahita matetika 25-120KHz / 25 & 35KHZ
Fonosana Boaty loko
Karazan-bibikely Voalavo, vitsika, hala, moka, kalalao
Size 7 * 10cm
F1 .: orinasa ve ianao?
A: Eny, orinasa izahay, tongasoa hitsidika anay.
F2 .: omena ve ny santionany?
A: Eny, azo omena ny santionany maimaimpoana.
F3 .: Azontsika atao ve ny manamboatra ny vokatra?
A .: Azo antoka, sary famantarana, loko, boaty azo amboarina, ny marika manokana dia tohanana ihany koa
F4 .: Inona ny fotoana itarihana?
A .: Matetika 1-2 andro ho an'ny lamina santionany, 3-5 andro ho an'ny filaminana mahazatra, 7-10 andro ho an'ny lamina namboarina.
F5 .: Inona ny fepetra fandoavam-bola?
A .: Fametraham-bola 50% + fandoavam-bola 50%. Paypal, Western Union, T / T, baiko fiantohana ara-barotra dia tohana.
F6 .: Inona no antoka?
A .: Manome fiantohana kalitao 2 taona izahay
Teo aloha: Famokarana ozinina 2020 alefa ao amin'ny alàlan'ny alàlan'ny famonoana bibikely ultrasonika an-tsokosoko
Manaraka: 2020 Amazon Best Seller upgraded Ultrasonic Pest Repeller Plug Pest Reject, Fanaraha-maso ny Pest Electric, Bug Mouse Repactor
Repeller Electronic Pest Elektronika
Bunning Repeller Repeller Ultrasonic
2019 Amazon mafana amidy an-trano plastika Humane L ...
Fitsipika Amerikanina sy fenitra Eoropeana ...
2020 Mini manan-tsaina Mini bibikely mpanohitra Ultr ...
2020 Amazon Best Seller nohavaozina Ultrasonic Pes ...